I-Lenovo New Glass C220, ukuzibophelela okutsha kwinyani eyongeziweyo | Iindaba zeGajethi
UJuan Luis Arboledas | | I zi ganeko, Te knoloji
Nangona kubonakala ngathi okwangoku CES 2018 ayinakusothusa ngayo nayiphi na enye into, njengoko kuqhele ukwenzeka kolu hlobo lwamatyala, besiphazama kwaye, ngobusuku obunye sizifumene lenovo kunye nentetho, ngaphandle kwesaziso sangaphambili kuba nkqu nakwinkomfa inkampani eyinike izolo bekungakhankanywanga nantoni na, kwezinye iiglasi zenyani ezongeziweyo.
Ezi ziglasi zintsha kunye nezinomdla, njengoko sele sitshilo, yinto entsha yokubheja ukuzisa kubo bonke abasebenzisi itekhnoloji esiyithandayo kakhulu kodwa yona ibangele ezinye iintloko kwezinye iinkampani ezinje ngobunyani obungathandabuzekiyo. Ukunikeza 'into eyahlukileyo'I-Lenovo ikwazibophelele ekuxhobiseni iiglasi zayo ingqiqo ukwenzela ukuphucula yonke imisebenzi yayo.
Ngaphambi kokungena kwiinkcukacha ezithe kratya, kupapasho lweendaba olunikezwe lisebe lezonxibelelwano likaLenovo, kwabhengezwa ukuba ezi glasi zintsha, zenziwe zasebenza ngegama Iglasi eNtsha C220 Sele zifikeleleke kwintengiso. Okwangoku, kufuneka kucaciswe ukuba, ngelishwa, yenzelwe ukuba isetyenziswe licandelo lobungcali, elezemfundo nelamashishini, ke, okwangoku, kugwetyelwe ukuba nawuphi na umthengi angazifumana enjalo.
1 I-Lenovo New Glass C220, iiglasi zokwenyani ezongeziweyo ezinamandla amangalisayo
2 Ngexesha le-2018 iLenovo izakuqala inkqubo yokulinga apho iinkampani ezimbalwa e-China ziya kusebenza kwezi glasi
I-Lenovo New Glass C220, iiglasi zokwenyani ezongeziweyo ezinamandla amangalisayo
Ngokungafaniyo nezinye iindlela esikhe sazazi iinyanga, ukubheja okwenziwe nguLenovo kwiGlasi eNtsha C220 ineiglasi ezibonakaliswa Ihlanganiswe kwiindawo ezimbini. Kwelinye icala sineeglasi ezixhotyiswe ngeglasi kwaye ubunzima bayo bumalunga ne-60 yeegram, njengakwezinye iimeko, eya kusebenza njengesikrini esingokoqobo esingathandabuzekiyo. Okwesibini, kukho into ebizwa ngokuba yinkqubo yokulungisa eya kuthi ijongane nokunyanga lonke ulwazi oluvela kwii-sensors kunye nokubonisa iziphumo.
Ukujolisa kwiyunithi yokuqhubekeka, njengoko kutyhilwe, isekwe kwi-Android kwaye ineqonga layo lobukrelekrele bokuyisebenzisa, ngakumbi isebenzisa iqonga lesoftware ILenovo NDB AH Ilifu 2.0 ethi, njengesikhumbuzo, idibanise iinkqubo zobunyani obungathandabuzekiyo, ubukrelekrele bokuzenzela kunye neDatha eNkulu. Elona candelo linomdla kakhulu kukuba, ekubeni iglasi eNtsha C220 zimodareyitha, njengoko besesitshilo, U-Lenovo unethemba lokuba iinkampani ezahlukeneyo zinokwenza iiyunithi zokulungisa Ukuze wandise onke amandla emveliso.
Okwangoku, asinakusilela ukuyikhankanya into yokuba, njengoko kunokubonwa kwimifanekiso, abayili beLenovo kunye neenjineli banikezele ngezi glasi ziyinyani. Inkqubo yokuqhutywa kwethambo. Kuyabonakala ukuba kwaye ngokwengxelo epapashiweyo, le nkqubo yenzelwe ukuthathela ingqalelo oko iiglasi kwakufuneka zisebenze kwiindawo ezinengxolo.
Ngexesha le-2018 iLenovo izakuqala inkqubo yokulinga apho iinkampani ezimbalwa e-China ziya kusebenza kwezi glasi
Ngelishwa, ngaphandle kwayo yonke into enxulumene nokuza kuthi ga ngoku, zimbalwa iinkcukacha ezithe zanikezelwa nguLenovo malunga nale mveliso ngaphandle, umzekelo, indlela yokusebenzisa, into enokuba luncedo ngakumbi ukuba uyingcali eceba ukubamba iqela kwezi mpawu. Ngokubhekisele kwindlela yokusetyenziswa, kubonakala ngathi ziiglasi, ixesha lokuqala zisetyenziswa, kufuneka zinxibelelaniswe ne-smartphone yethu. Nje ukuba olu nxibelelwano lusekiwe, lubalulekile kuqwalaselo oluchanekileyo, akusayi kubakho mfuneko kuba iiglasi ziya kusebenza ngeWiFi.
Ngokwam, kufuneka ndivume ukuba le yimveliso enomdla kakhulu yomthamo kunye nokusebenza, into enomdla ngalo mbandela uphela kukuba, nangona inamandla amakhulu, isuka U-Lenovo akazange afune ukuyinika lonke uluntu ukuba kufanelekile. Phakathi kwezizathu ezinokubangela oku, khankanya umzekelo ukuba ixabiso okanye umhla abaya kufumaneka ngawo awaziwa nangona, ngokutsho kwezinye izimvo, kubonakala ngathi uvavanyo lokulinga luya kwenziwa kulo nyaka u-2018 kwiinkampani ezimbalwa e China.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I zi ganeko » I-Lenovo New Glass C220, ukuzibophelela okutsha kwinyani eyongeziweyo
AbakwaSony bathengise ngaphezulu kwe-5,9 yezigidi ze-PS4 consoles kule Krismesi
I-BLOCKS, iwotshi yemodyuli iyaqhubeka ukuthengisa emva kweminyaka yomsebenzi